E-News Nepali || Fast and Accuracy » कसको दबाबमा हटाइयो त मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई ?
कसको दबाबमा हटाइयो त मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई ?
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन साहसिक भूमिका निर्वाह गरेका श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको बहिगर्मनप्रति नागरिकस्तरमा चासो र चर्चा भइरहेको छ।मलेसियाको रोजगारीमा वर्षो‌देखि कायम सिन्डिकेट हटाउने र वैदेशिक रोजगारिलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास गरेका विष्टलाई हटाउनुपर्ने कारणबारे सामाजिक संजालमा विभिन्‍न प्रश्‍न सोधिएका छन्।
राम्रो काम गरेर नागरिक प्रशंसा बटुलेका विष्टलाई हटाएर सार्वजनिक दृश्यमा नभएका लो प्रोफाइल का रामेश्‍वर राय यादवलाई ल्याइएको छ। मधेसवादी दलमा क्रियाशिल रहेका यादव केही वर्ष अघि मात्र तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए। कमजोर पात्रलाई मन्‍त्री बनाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा रँजाइ गर्दै आएको गिरोहलाई चलखेल गर्न अब सजिलो भएको छ।
नेकपाभित्र स‌म्भावना भएका थोरै युवा नेताको सूचीमा पर्ने गोकर्ण पार्टी पंक्तिमा मात्र लोकप्रिय छैनन् बाहिर पनि उनको छवि राम्रो छ। यसअघि ऊर्जामन्‍त्री हुँदा पनि उनले केही उदाहरणीय काम गरेर नागरिक चर्चा र स्याबासी पाएका थिए। निवर्तमान श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विष्टले आफू मन्त्री पदमा रहँदा ज्यामी माहुरीले जस्तै काम गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन्।
विष्टले असुरक्षित र अपारदर्शी ढंगले कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर एजेन्ट र कम्पनीमाथि प्रभावकारी ढंगले छानबिन र कारबाही अघि बढाएका थिए। त्यतिबेला देखि नै म्यानपावर एजेन्टको तारो बनेका थिए विष्ट। विष्ट हटेपछि कारबाहीको त्रासमा रहेका म्यानपावर एजेन्सीले खुसी मनाएका छन्।
प्रकाशित मिति ६ मंसिर २०७६, शुक्रबार १२:०१